Ngwunye egwu egwu
Njikere na-abụghị ọkọlọtọ
Ihe na-ebu ibu
7 ụdị bearings
Biri ụgbọ ala
Igwe eji arụ ọrụ ugbo
Nrụọrụ akụrụngwa bearings
NSK na-abụghị ọkọlọtọ bearings
Njikere ụgbọ ala
Ibu ọgba tum tum
Igwe bọọlụ na-ebu moto
A na-eji bearings eme ihe na igwe dị iche iche. Enwere ike ịsị na ọ bụrụhaala na ị na-agba igwe, bearings enweghị ike kewaa. Bearings bụ isi akụkụ nke ọgba tum tum. Maka ụdị bearings niile, ọrụ ya dị nnọọ iche. N'elu ọgba tum tum, a na-ejikarị bọọlụ eme ihe n'ime mbanye.
Ihe na-akpata na ngwọta nke ibu corrosion
Ịba corrosion na-emekarị, nke ga-ebelata ọrụ ndụ nke ibu ahụ. Ya mere, anyị ga-aṅa ntị na nsogbu a na ọrụ anyị kwa ụbọchị. Iji chọpụta ihe na-akpata na ụzọ mgbochi nke oke okpomọkụ na-ebu corrosion, anyị kwesịrị ibu ụzọ leba anya n'ihe na-ebute corro okpomọkụ dị elu ...
Usoro maka ịhụ na a pụrụ ịdabere na ọrụ bearings
Usoro iji hụ na a na-arụ ọrụ a pụrụ ịdabere na ya nke bearings Iji jide n'aka na ọkpụkpụ ahụ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma, gịnị ka a ga-aṅa ntị site n'echiche nke ojiji? N'ikwu okwu n'ozuzu, ṅaa ntị na isi ihe ndị a site n'echiche eji eme ihe: 1. Nwechapụ ikike kwesịrị ịkwado...
Kụziere gị ịgbatị ndụ ọrụ fag bearings ebubata
Otu esi eji ya gbatịa ndụ ya wee wetara anyị ọtụtụ uru. 1. Ntinye nke bearings mbubata Ma etinyere bearings ebubata n'ụzọ ziri ezi na-emetụta izi ezi, ndụ na arụmọrụ. Ya mere, ngalaba nhazi na mgbakọ kwesịrị ịmụ nke ọma nrụnye ...
Kedu ihe na-ebute oke ibu nke SKF Bearing yana otu esi ezere ya?
Oge ntọhapụ: Mee 9, 2017 pịa Chọgharịa: ugboro 168 Oke ibu nke SKF Bearing na-egosipụtakarị na isi ihe ndị a: 1. Stamping siri ike 2. Kpatụ Timken ozugbo 3. A na-ebute nrụgide site na ihe na-atụgharị. Gbalịa iji ngwá ọrụ pụrụ iche ma gbalịa igbochi iji cl ...
N'iji mkpịsị aka nke mkpịsị aka, nyocha nke ike na-ebufe ihe na-eme ka ọ dị mma kwesịrị ka a mara ya
Oge ntọhapụ: May 9, 2017 pịa Chọgharịa: 141 ugboro Tapered roller bearings dị mma maka ibu radial load, unidirectional axial load na jikọtara radial na axial load. Ikike ibu axial nke roller bearings na-adabere na akụkụ kọntaktị α, N'akụkụ agbụrụ agbụrụ dị n'èzí, akụkụ kọntaktị ...
Akpụkpọ ụkwụ na-abụghị ọkọlọtọ ejirila nke nta nke nta bụrụ isi ihe mejupụtara ya
Akpụkpọ ụkwụ na-abụghị ọkọlọtọ Bearings bụ ihe dị mkpa na isi ihe ndị bụ isi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nke na-ekpebi kpọmkwem arụmọrụ, àgwà na ntụkwasị obi nke ngwá ọrụ ndị bụ isi na ngwaahịa ndị ọbịa, ma mara ya dị ka akụkụ "obi" nke mmepụta ngwá ọrụ. Af...
Otu esi elele ọdịdị nke bearings na-abụghị ọkọlọtọ
Ụdị ọnya ọ bụla, dị ka abrasions, ncha, mmerụ ahụ nrụgide, ọnya, wdg, ga-eme ka nrụnye nrụnye na-adịghị mma, na-ebute ibu eccentric na nrụgide nrụgide, ma mee ka mbelata nke ntụgharị ntụgharị na ndụ ọrụ. Corrosion, oji akpụkpọ, na pitting, nke ikpeazụ abụọ bụ d..
Atọ nghọtahie na mgbakọ nke na-abụghị ọkọlọtọ bearings
Mgbe ị na-etinye ma na-achịkọta bearings na-abụghị ọkọlọtọ, anyị nwere ezigbo ihe a chọrọ n'elu nrụnye na ebe. Ọ bụrụ na ị naghị eleba anya na mmetụta nke gburugburu ebe mgbakọ, a ga-ejikọta ihe ndị mba ọzọ dị ka nchịkọta ígwè na burrs n'ime ihe ndị na-abụghị ọkọlọtọ, wh ...
Nlekọta na mmanu nke bearings na-abụghị ọkọlọtọ
Dị ka ojiji nke akụkụ na ọnọdụ nke ojiji na gburugburu ebe obibi ọnọdụ, họrọ size, izi ezi, na kwesịrị ekwesị na-abụghị ọkọlọtọ bearings bụ premise iji hụ na-ebu ndụ na ntụkwasị obi. Ebe eji eme ihe: bearings na-abụghị ọkọlọtọ dabara adaba maka ibu radial na axial jikọtara ọnụ nke bụ ...
Ụzọ nrụzi akọwapụtara maka bearings na-abụghị ọkọlọtọ
Akpụkpọ ụkwụ na-abụghị ọkọlọtọ Mgbe ibu na-eweta nsogbu; echiche mbụ dị na ndepụta ahụ kwesịrị ịbụ ịlele na ịrụzi; ọ bụghị ịgbanwe. Ụdị nrụzi ihe n'ozuzu bụ ndị a: 1. Ndozi mmejọ: Mgbe ọkpụkpụ na-akụda; kwụsị ikiri na ịrụzi. 2. Ndozi oge: Iji hụ na t...
Nsogbu na ntinye nke bearings na-abụghị ọkọlọtọ
Akpachara anya maka ojiji nke na-abụghị ọkọlọtọ bearings: 1. Mgbe otu afọ nke nkịtị ọrụ, 2 # spindle mmanụ na keadighi rarii na ezi nzacha mmewere kwesịrị dochie. 2. Mgbe a na-eji ebe mgbapụta ahụ eme ihe na-emekarị ka ọ bụrụ mmanụ, a ga-eji akwa silk 3 mee ka ọ dị mma. 3. The loading and unloadin...
adreesị:Tang Tang yuan yuan obodo, liocheng na Shandong Linqing obodo, nnukwu okporo ụzọ mba. 168